GORMAASHOOYINKA: TALOOYIN GUUD IYO KHIYAAMO LOOGU TALOGALAY BEERASHADA IYO DARYEELKA - CHERRY
Sida loo koro cherry beerta: beerto, waraabinta, manjooyin, bacriminta
Iyadoo aan cherry, waa adag tahay in la qiyaaso beerta dhabta ah. Ku dhowaad goob kasta oo aan ku koraan cherry beerta. Iyo inta badan ma aha mid geed, laakiin dhowr ah. Miro of cherry waa delicious, caafimaad leh, beduliyadeed, oo leh dhadhan macaan oo macaan, oo la yaqaan badan tan iyo carruurnimada.
Intaa waxaa dheer, Cherry ayaa ku qurux badan oo eegaya dhammaan geedo midho leh. Iyo beerista jeeriga iyo daryeelka for iyada ma aha mid aad u adag.
Sida loo doorto meel loogu talagalay cherry beerta
Si kastaba ha ahaatee, si ay cherry si fiican u caadaysteen iyo wajiga hodanka ah, waxaa lagama maarmaan ah in la waafajiyo dhammaan xaaladaha loogu talagalay kobcinta wanaagsan.
Intee in le'eg iftiin ayaa loo baahan yahay for cherry
Iftiimintu waa inay ahaato mid wanaagsan - maraq waxay jecel yihiin iftiin dhalaalaya iyo bannaan furan. Laakiin waxay horumarin karaan oo u kori karaan sida caadiga ah ee penumbra, kaliya ee kiiskan fruiting iyo xawaaraha ah Bisaylkiisa ee berry hoos u dhigi doonaa.
Ma cherry dalbanaya ciidda
Beeralayda leh cherry on site waa in la ogaado nooca ciidda ay jecel yahay. Geedka ayaa si fiican u kori doona carrada bacrin ah. Waxay kaloo ku koreysaa bacaadka, bacaadka, bacaadka, loamy, oo leh waxoogaa alkaliin ama falcelin dhexdhexaad ah. Waxa ugu muhiimsan waa in si sax ah loo go'aamiyo pH ciidda iyo, haddii ay lagama maarmaan noqoto, isbeddel adigoo soo bandhigaya qaybaha ku habboon.
Waa muhiim! Ha ku beerin jeeriga on carrada acidic. Cadaadiska ugu wanaagsan ee ciidda ee jeeriga waa 7, 0.
Haddii ciidda ay acidic tahay, waxaa la isudhiyey ama alkalized, tusaale ahaan, adigoo ku daray lime, budada budada ah, xumbada dolomitic, burka dolomitic, iwm.
Carrabku waa inaanay noqonin clayey, culus - kiiskan kaddib waxaa loo keenay gudaha, iyo sidoo kale biyo la gooyey - geedku ma jecla qoyaan badan. Sidaa darteed, dooro goobta leh biyaha dhulka - dhacdo aan ka badnayn 1.8-2 m.
Goorma ayay ka fiican tahay in la beero cherry
Ma jirto jawaab qeexan su'aasha marka ay ka wanaagsan tahay in la beero cherry guga ama dayrta. Waxay noqon doontaa sax in loo hoggaansamo nidaamka soo socda: gobollada waqooyi, halkaas oo dhaxan xilliga qaboobaha ah -30-40 ° S, waxay ku beeraan cherry oo kaliya guga; ee gobollada koonfureed, geedo lagu beeray guga iyo dayrta, ama geedo lagu daro jiilaalka si loo beero guga.
Beerto Cherry guga
Waqtiga lagu beeray jeeriga xilliga guga waa ka hor inta aan la gooyin, qiyaastii bilowga ama badhtamaha bisha Abriil, iyadoo ku xiran hadba xilliga guga ama guga dambe. Haddii aad ka maqnayd waqtigan oo caleemuhu furmi doonaan, markaa geedahaasi way jiran yihiin waxayna u badantahay inay qaadaan xidid.
Inta badan la beeray jeeriga guga ee gobollada woqooyiga iyo laydhka dhexe. Tani waxay sabab u tahay qaboobaha dufan ee adag, kaas oo geedka dhiman karo, lagu beeray dayrta. Ciidda beeritaanka jeeriga guga waa in si buuxda u bilaash ah oo baraf ah, la qalajiyey, maalinta - dabayshu, qorraxdu, ma jiro roobab.
Qaababka beeritaanka dayrta
Waqtiga ugu wanaagsan waa dhammaadka Sebtembar - bilowga Oktoobar. Later ma ay beeraan, suurtogalnimada dhimashada nidaamka xididka ee seedling ka soo dhaxan waa sare. Geedo la beeray - rusheeyey lakabka dhulka ee foomka tuulo ah - 35-40 cm dusha dhulka.
Ma taqaanaa? Halkee ayay ka fiican tahay in la beero jeeriga goobta? Haddii ay leedahay tuulo furan ama buur yar, ka dibna. Ha si toos ah ugu beeran dayrka sare, dayrka, dhismayaasha ama geedo kale oo baaluq ah.
Sida loo abuuro seedling cherry ah
Erayo yar oo ku saabsan sida loo abuuro cherry. Ka hor inta beerto, sapling waxaa la baaro mar kale - xididdada, laamood, si ay u bilaashaan waxyeello iyo cayayaanka. Haddii ay jiraan geedo dhowr ah, aagga iyaga ka hooseeya ayaa loo siman yahay waxayna bixiyaan masaafada u dhaxeysa - 3-3.5 m, iyo inta u dhaxeysa saf - 3.5-4 mitir.
Kaligeed, cherry waa dhaqan aan la qabin, beerashada iyo daryeelidda ma aha xoog shaqo. Laakiin markaad beerto geedo farabadan, waa ka fiican, dabcan, inuu caawiyo.
Ku qodo dalool hore - 2-4 asbuuc (haddii ay suurtogal tahay) ka hor inta aan la daadin. Muddadan, ciidda qallajin doonaa si ku filan, saturate leh ogsijiin iyo soo nuugo dhammaan Bacriminta codsatay. Cabbirka caadiga ah ee ceelka geedo cherry ah - 70 * 70 * 70.
Laakiin halkan waxay eegayaan horumarinta nidaamka asaasiga ah - haddii ay tahay aag, si wanaagsan loo horumariyay, ka dibna daloolka ayaa la ballaadhiyaa. Dhulka dhul-gariirka ah ayaa loo kala qaybiyaa qiyaastii isla markaana qayb ka mid ah waxaa lagu qasan yahay Bacriminta.
Qalab alwaax ah oo ku meel gaar ah (taageerid loogu talagalay dhalmo) oo dhulka ku dhex jira 50/50 oo leh Bacriminta ayaa lagu riixaa bartamaha ceelka. Maxaa ka dhigaya cherry si fiican u koraan iyo koritaanka waa on arrinta organic (humus) oo lagu daro chloride potassium, ash iyo superphosphate.
On hose dhoobo dhoobo dhigay geedka si qoorta xagjirka ah waxaa la sara kiciyey 3-5 cm dhulka kor. Oo waxay bilaabaan inay si tartiib ah ku rusheeyaan xididada dhulka leh dhinacyada oo dhan, marmar cadaadinaya, adoo adeecaya dhulka leh palmka gacantooda, ka dibna heerarka godka dusha sare. Gebogabadii, jirku wuxuu ku xiran yahay hiin qafiif ah.
Ma taqaanaa? Haddii xididdada geedka ay qalalan yihiin, waxaa lagu hayaa biyo ilaa 2.5-3.5 saacadood ka hor intaan la beeriin, ka dibna waxaa lagula talinayaa in lagu rido garoonka beerta.
Sida loo daryeelo jeeriga ee beerta, talooyin iyo khiyaamo
Waxaa jira dhowr tilmaamood oo loogu talagalay daryeellida geedka, taas oo la raacayo.
Xeerarka waraabka cherry
Marka cherry waxaa la beeray, bangiga dhoobo waxaa lagu tuuraa oo ku saabsan dhexroorka godadka, 20-25 cm, iyo taxadar leh in hunqaacay helay wareegga seedling, si tartiib ah ku shub biyo - 1.5-2 baaldiyo. Marka biyaha la nuugo ka dib marka waraabka, ciidda dhulka ku dhow waa mulched. Mustaqbalka, geedka ayaa u waraabiyay sida hadba loo baahan yahay, ka ilaalinta biyaha xad-dhaafka ah.
Sida loo bacrimiyo a cherry
Dardar gelinta iyo fududee beerista ee jeeriga si sax ah u dalban Bacriminta. The 2 sano ee ugu horreeya ka dib markii laga beerto ma aha lagama maarmaan si loo quudiyo jeeriga. Muddadan, geedku wuxuu leeyahay nafaqo ku filan oo lagu soo bandhigo godadka beerta.
Sannad saddexaad ka hor ubax, diyaarinta nitrogen-ka kooban ayaa la soo saaray. Waxaa fiican inaad tan sameyso waraabka, tusaale ahaan, cusbada cusbada biyaha - 25 g / 10 l. Inta lagu jiro ubaxyo ubax ku quudin leh humus, compost ama dhibco, sidoo kale foomka dareeraha ah (lagu badhxo biyo) waraabka. Sidoo kale bartamihii xagaaga - Julaay - bilowga Agoosto, waxaad mar kale samayn kartaa cusbato ama arrin organic ah.
Dharka dayrta - Bacriminta dabiiciga ah ama potassium-fosfate. Waxay sameeyaan dayrta xilliga dayrta, ka dibna qodo qoto dheer. Laakiin aan qoto dheereynin 15 cm.
Sida loo gooyo jeeriga beerta
Cherry budo marka beeritaanka si dhakhso ah loo sameeyo. Laga soo bilaabo laynka dhulka ilaa laanta koowaad waa inay ahaataa 50-55cm oo ah jir dhuun leh - masaafadaas ayaa loo yaqaan shtamb. Inta kale ee laamiyada dheeraadka ah ee jirridda ayaa la jaraa.
Dooro 6-7 geedo adag oo xoog leh xagal aan ka yareyn 40-45 digrii oo jir ah, taas oo noqon doonta aasaaska taajka mustaqbalka, oo gaaban 7-10 cm.
Dhammaan laamaha geedka kale waa la jaraa.
Ma taqaanaa? Wareeg kasta oo la sameeyo si sax ah oo sax ah. Laamaha la gooyey ee "eber", taas oo ah, iyada oo aan laga tegin. Meelaha la jarayo waxaa lagu daaweeyaa garoonka beerta.
Mustaqbalka, sanad walba, jeeriga la isku xidhay - sii wadaan sameynta taaj, ka saar caleemaha la qalajiyey ama jirran, iyo had iyo jeer xididka, kobaca soo baxa.
Sida loo ilaaliyo cherry xilliga jiilaalka
Guud ahaan, cherry waa geedka dermada u adkaysta, wuxuu u dulqaadanayaa heerkulka hoose-hoose iyo hibernates caadi ahaan. Laakiin waxaa jira barafyo leh baraf yar, taas oo nidaamka xididada cherry ku xanuunsan meesha ugu horeysa. Badbaadada ugu fudud ee kiiskan waa in lagu daboolo jirridda geedeed ee barafka oo ku dhajiya caws iyo balka dusha sare, daboola laamood.
Ka hortagga cayayaan iyo cudur
Daryeelka saxda ah ee jeeriga waxay ka caawisaa in laga fogaado cudurada iyo cayayaanka. Dhamaan cudurrada si fiican looga hortago. Xilliga dayrta, ka dib marka miraha ugu horreeya, johriga iyo ciidda dabiiciga ah ee dabiiciga ah ayaa lagu buufin karaa 5-6% xal of HOL si ay u burburiyaan jirooyinka.
Xalka qasacadaysan waxay leedahay saameyn waxyeello ah oo ku saabsan cayayaanka waxyeellada leh, maadiga iyo fangaska.
Iyo ka hor inta ku xereen - saar dhammaan dhammaan bukaanka bukaanka ah, gooyo, laamaha jabay, caleemaha dhacday iyo xidhaan dildilaaca on jilif. Bedelkii Hure, daroogada fungicidal iyo antimicrobial waa loo isticmaali karaa - Zineb, Scor, Nitrafen, Flatan, Topsin M, Oxychloride copper, dareeraha bordeaux, iwm.
Waa muhiim! Coccomycosis iyo moniliosis waa cudurro fungal ah oo daran ee cherry. Ka hortagga, ka hortagga cudurka waa mid ka mid ah hawlaha ugu muhiimsan ee bannaanka.
Laga soo bilaabo cayayaanka waxyeellada cherry weevil, aphid, caleemaha caleemaha, sawfly. Diidmada waxaa loo isticmaalaa daroogooyinka "Inta Vir", "Spark", "Aktara".
Hababka taraqda Cherry
Cherry jimicsi dhowr siyaabood.
Mid ka mid ah hababka taranka ugu wanaagsan. Faa'iidada waa in aad ka heli kartaa a geedka-xidid geedo varietal.
Gooyn waa la gooyaa xilliga koritaanka xooggan ee geedka - bilawga - badhtamaha June.
Muuqaal muuqaal ah oo ku saabsan waqtiga ugu fiicnaa ee gooyuhu wuxuu noqon doonaa qulqulka qaybta hoose ee jirdhiska iyo jilifaha jilicsan ee korka iyo xarunta.
Waa lagama maarmaan in la gooyo baxsado maalin qabow aroortii hore ama fiidkii. Iska yaree caleemaha 25-30 cm dheer oo leh tiro badan oo ku hari korniinka, u kala qeybi cutubyada la gooyo qeybtii, ka tago laba bog oo qayb kasta. Ka dibna ku buufin caleenta iyo meel biyo ah, oo aad awoodi kartid (laakiin aanad hubin) ku dar sheybaaraha koritaanka.
Laamuhu waxay biyaha ku qoyan yihiin 1.5-2 cm, waxayna ku jiraan 12-24 saacadood waxaana lagu beeray aqalka dhirta lagu koriyo - qoto dheer oo ah 3-4 cm, nidaam - 8 * 5. Wixii aqalka dhirta lagu koriyo, peat iyo ciid ayaa loo qaataa si isku mid ah marka la barbardhigo, isku dhafan oo la dhigo dhulka. Dheji dusha sare iyo daadi ilaa 2 sm oo mar labaad ciid, nadiifi si fiican. Ka dib markii la beerto sariirta gogosha sare ee daboolay filimka.
Marka sida caadiga ah 3-4 toddobaad ka dib ay soo baxaan xididada, filimka ayaa hoos loogu dhuftay dhinaca geesta hawo-qaadashada iyo adkaynta gooynta. Sidoo kale, ka dib markii formation xidid, bacarimiso waxaa loo soo bandhigay dhirta - maaddooyinka organic dareeraha ama isku dhafka potassium-fosfooraska.
Gooyn ayaa si wanaagsan u-xidhan, la dahaamiyay oo ka tagay jiilaalka dhulka ama qoday oo la keydiyay ilaa guga Maqsin, dhulka hoostiisa. By beerto iyo koraya sida gooyn sida guga, dayrta waxay helaan geedo cherry si buuxda u horumarsan.
Cuncunka caleemaha geedka
Tani waa hab sahlan. Fiican-khudradda, dhirta sare leh waxay ku habboon tahay isaga. Halka hooyada of cherry dooran laba sano oo caleemo leh branching ku filan iyo xididdada xoog leh.
Waa muhiim! Caleemaha si toos ah ayey u koraan jirkooda, maadaama ay taasi waxyeeleyn karto nidaamka asaasiga ah ee geed weyn.
Kadibna waxay gooyeen xididada ku xiran dhalinyarada la soo xushay iyo stem stem - taas oo dhan. Guga, caleemaha kala gooni ayaa lagu qodaa oo lagu beeray meel kale. Qodobkan ayaa sidoo kale noqon doona mid iskood u gooni ah, sidaas darteed, ilaalinta dhammaan calaamadaha geedaha waalidka.
Si aad u bilowdo in lagu qoondeeyo awooda "dabacsan", miraha wax ku oolka ah. Si arrintan loo sameeyo, lafaha casiirka cusub (abuurka) ayaa la qalajiyey, ka dibna lafaha qalalan waxaa lagu qoynayaa dhowr saacadood oo biyo ah. Kaliya kuwa soo galay xagga hoose ayaa loo doortaa biqilka, iyo kuwii soo baxay ayaa la tuurayaa. Lafaha haray ee jeeriga at heerkul ah + 13 ... +15 ° C ayaa lagu meeleeyaa isku dhafka ciid iyo biyo waxayna ku haraan weelka illaa guga.
Ma taqaanaa? Gobollada leh qaboobaha khafiifka ah, dhagaxyada waxaa la beeran karaa bartamaha ama dhammaadka bisha Agoosto.
Waxaad ka tagi kartaa lafaha on veranda, oo ah qarsoodi qallalan. Sida loo baahdo, qoyso ciidda si aan qallajin lahayn. Guga waxaa lagu beeray qoto dheer oo ah 2-2.5 cm oo u dhaxaysa 40-45 cm midba midka kale. Top peat prutrivayut, sida balka. Ka dib markii biqilka ka soo baxay.
Dheeraad ah, ka dib geedka, daryeelka caadiga ah waa jaridda dhirta, waraabinta, bacar saarista arrinta organic ama Bacriminta macdanta. Geedo ama qodo jiilaalka Maqsin, ama ka tagay xilliga jiilaalka iyo filimka. Geedka isku dhafan ee guga waxaa lagu beddelaa meel joogto ah.
Geedaha laga helay qaabkan ma badbaadin karo sifaha geedka hooyada - cabbirka berry, dhadhanka, dhalidda iyaga ayaa ka duwan.
Kordhi jeeriga caleemaha xididka, on geedo (stock koray) ama on geedo mid ama laba sano jir ah. Gooyn ee loogu talagalay 12-15 cm iyo 2-3 burooyinkeeda waxaa la qaataa dayrta goor dambe ama horraanta xilliga qaboobaha - si aad u daran. Ku dheji jarista qeybta hoose, ama baraf baraf ah, peat pritrushchenny, sida balka.
Talaalka waxaa la sameeyaa guga - inta lagu jiro socodka dheecaanka, tani waa waqtiga ugu fiicnaanta sawirka. Waxaad isku dayi kartaa in aad is tallaaltid xagaaga, laakiin, waxay u badan tahay, oo leh saameyn yar. Haddii aad isku daydo in aad tallaasho xilliga xagaaga, gooynta waxay qaateen kuwa cagaaran oo cusub. Waxaa jira laba habab oo tallaal ah. Dareemista - waa wax la yiraahdo "peephole" iyo Kala saaridda - kani waa xeelad. Farsamooyinka daaweynta - ee kala qaybsan, jilif, kudubka, dhinaca jarjaran. Bannaanka u khibrad leh waxay kugula talinayaan bilowga inay bilaabaan hab - kala qaybsanaan.
Iska yaree laan ka mid ah kaydka oo ka tag dhicin. On jirridda, waxay kala qaybsan, gelin jarida waxaa la galay qorshe cusub oo la cusbooneysiiyey, gooyey la gooyey iyo jilif la jarjarey. Caleenta jarida ayaa la gooyaa dhererka dhererka cagaha.
Markaas laanta kala qaybsan oo leh cajalad dhegeysi ah primyvayut. Goobta qalliinka waxaa lagu dhajiyaa qashinka beerta, iyo bac caag ah ayaa lagu ridayaa jirida meesheeda ka soo koreysa. 12-15 maalmood ka dib, iska hubi tallaalka, haddii jarida ay qaadatay xididka, xirmada ayaa la saarayaa.
Horumarka ee cherry iyo daryeellaha waa wax awood u leh xataa xitaa qof qaadaya tallaabooyinka ugu horeeya ee beerta. Muujinta adkeynta iyo wax kasta oo saxda ah, ka dib 2-3 sano ka dib, waxaad horay u heli kartaa goosashada ugu horeysay. Labada macno ahaan iyo sawir ahaanba - inay ku raaxaystaan ​​miraha gacmahooda.
Noocyo oo ah basbaas Siberia
Soo saarista dhirta